Akhriso: Midowga Musharaxiinta oo shuruudo adag soo bandhigay - Home somali news leader
Home NEWS Akhriso: Midowga Musharaxiinta oo shuruudo adag soo bandhigay
Midowga Musharaxiinta ayaa hadda shir dhanka qadka Zoomka kula leh Wakiilada Beesha Caalamka ee loo yaqaan C6+, iyagoo ka wada hadlaya is mari waaga siyaasadeed iyo dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho.
Warqad Beesha Caalamkanu qoreen oo ahaa labo bog ayay ka dalbadeen in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo weerarkii lagu qaaday Hotelkii ay degenaayeen Madaxweynayaashi hore, sidoo kale falkii lagu rasaaseeyay bannaan bixii ay hoggaaminayeen qaar ka mid ah Musharaxiinta.
In Madaxweynihii hore Maxamed C/llaahi Farmaajo inuu ku wareejiyaa talada Gole Qaran oo Kumeel Gaara ah, In heshiis kama-dambeys ah laga gaaro saddexda qodob ee muranku ka taagnaa ee hore u jiray qaab dhismeedka hay’adaha maamulka doorashooyinka, Arrinta Somaliland iyo Arrinta Gobolka Gedo, in Golaha Musharaxiinta Madaxweynaha inay si toos ah uga qeybqaataan wadahadalada doorashooyinka iyo wadatashiga in la abuuro jawi siyaasadeed, oo ay ku jirto xorriyadda banaanbaxa, qabashada shirarka, ololaha, dhaq dhaqaaqa xorriyadda hadalka iyo u adeegsiga warbaahinta qaranka si siman.
Sidoo kale waxay soo jeediyeen in Taliyayaasha militariga, sirdoonka iyo booliska inay is casilaan madaama ay ku lug lahaayeen weeraradii ka dhanka ahaa musharixiinta Madaxweynaha ee mucaaradka.
Sidoo kale waxay soo jeediyeen Jadwalka cusub ee doorashada in uusan ka dheeraan muddo 60 maalmood, waana inuu jiraa dammaanad qaad caalami ah, iyadoo la tixgelinayo khilaafaadka soo noqnoqda iyo eedeymaha ku xeeran heshiisyadii hore.
Ugu dambeyn shirarka soo socda in lagu qabto goob amni ah, sidoo kale doorashada Madaxweynaha lagu qabto isla goobtii ay ka dhacday Febraayo 2017.
Previous article“Mafia-type” groups are likely behind cyberattacks in French hospitals, the minister said
Next articleArmenian Prime Minister Pashinyan calls the military’s demand that he resign “an attempted coup”